Dagaal ka soo cusboonaaday deegaanka Axmaarada. - Ogaden24 | Ogaden24
Dagaal ka soo cusboonaaday deegaanka Axmaarada.
Ethiopian soldiers stand guard near boxes of weapons found hidden under a building in Mogadishu May 9, 2007. A large cache of weapons, believed to have been hidden by the Islamists, were discovered in Mogadishu by the Ethiopian forces and their Somali allies on Tuesday. REUTERS/Shabelle Media (SOMALIA)
Dagaal xooggan ayaa ka bilawday gobalka waqooyiga Shewa ee deeganka Axmarada, dagaalku wuxuu ka bilawday Magallada Ataye oo ay ku dhinteen dad gaadhaya 20-qof.
Haddaba halkan kaga bogo xogihii u dambeeyay ee dagalkan:-
1.Dagaalku meesha uu ka bilawday waxay xuduud la leedahay gobal ismaamul gooni ah oo ay Oromadu degto, balse hoos yimaada deeganka Axmaarada.Goobtan waxaa 2018-kii ka aloosmay dagaalo u dhaxeeyay Oromada iyo Axmarada oo khasaare ba’an gaystay.
2.Maamulka Axmaradu waxay ku doodayaan in jabhada Onag Shane oo hub aad u culus siddata aya dagaalkan bilawday, warfaafinta Deeganka Axmarada oo arrimahan ka hadashay waxay cambaaraysay falkan. Waxayna sheegeen in la rabbo in colaad daba dheerata la dhex dhigo qowmiyadahan horay loo nabbadeeyay. Maamulka Axmaradu wali innaan shaqaaqadan la xakamaynin ayay sheegayaan.
3.Jabhadan hubbaysan waxay qabsatay qaybo kamida Magallada Ataye, waxayna khadka ka saartay addeegii isgaadhsiinta intii uusan dagalku bilaaban.
4.Arrinta cajibka ah ee lala yaabay ayaa ah, maamulkii Axmarada ee amniga kuwoodii aagan ku sugnaa oo la waraystay ayaa sheegay innay xaaladu faraha ka baxday, waxayna sheegen innay rasasta dhacaysay moodayeen mid loo ridayo AROOS.
Dadka Axmaarada ayaa kuu eedaynaya innay maalin dhan ogaan waayeen wixii halkaas ka dhacay.
5. Dad goob joogayaala oo warbaahinta Dawladda ee Axmarada la hadlay ayaa sheegay in dagaalku degmoyinkii kale ku baahay, waxayna sheegeen in magallada Shawro Bet xaalad culus gashay. Bulshadan ayaa ku baaqaya in loosoo gurmado, maadama dagaal culus ku furan yahay.
6.Waxgaradka Oromada ayaa sheegaya in ciddanka gaarka ah ee Axmarada iyo maleeshiyadoodu weerareen gobalka gaarka ah ee Oromadu degto. (Wollo-Oromo). Waxayna dagalkan ku sifeeyeen mid Axmaradu uga dan leedahay dhul balaadhsi iyo isir sifeyn.
Dawladda dhexe war rasmiya wali kama soo saarin, warbaahinta Dawladda dhexe iyo midda Axmarada ayaa dhinac kaliya xogtooda tabbinaya. Dagaalkan ayaa noqon kara mid colaad xoogan ka dhex abuura Oromada iyo Axmarada haddii aan xal deg-dega laga helin